Jowhar.com : Somali Leader News - News: Daawo sawirada: nin Shiinees ah oo korkiisa ay saaran yihiin 460.000 oo shinni ah
April 24 2014 14:33:08
Daawo sawirada: nin Shiinees ah oo korkiisa ay saaran yihiin 460.000 oo shinni ah
Nin ganacsade ah oo u dhashay dalka Shiinaha oo qeyb ahaan qaawan ayaa waxaa dushiisa ay saaran tahay illaa iyo 460.000 oo shinni ah si u soo bandhigo ganacsigiisa. She Ping oo 34 jir ah kuna nool Chongqing ee koofurta galbeed dalka Shiinaha ayaa wadooyinka mara isagoo dushiisa ay saaran yihiin shinni culeyskeedu uu gaarayo 100 pounds si u soo bandhigo ganacsigiisa.
She madaxa oo kaliya ayaa bac ama cinjir ugu xiran yahay marka shinnida ay dulsaaran tahay hase yeeshee illaa iyo afartan jeer ayuu sheegay in shinnidu ay miciyaheeda ku mudo.
�Runtii haddii aan ka hadlo xaaladayda sida ay noqoto marka aan howshaa kujiro waxa ay tahay in cabsi ay I hayso balse waxaan sidaa aan u samaynayaa in aan sare u qaado malabkeyga.� ayuu yiri ninkan dhalinyarada ah.
�Waan u bartay la dhaqanka shinnida,waxana aan bilaabay howshan anigoo 22 sano jir ah.�
Isagoo ka hadlay She waxyaanaha aysan ahayn in uu sameeyo marka uu howshan ku gudo jiro ayaa waxa uu yiri: 'Tan ugu muhiimsan waa inaan ka fogaado qubeyska oo aan xitaa isticmaalin saabuunta sababtoo ah waxa ay soo jiidataa shinnida,'ayuu yiri.
Magaalada Chongqing ayaa ah meel caan ku ah xanaaneynta shinnida iyadoo ganacsato badan ay joogaan. Waxaana lagu arkayaa dukaamada ku yaal magaaladaas sawiro ay kamuuqdaan ganacsatada oo jirkoodu uu daboolay shinnida. Waxaana la sheegay in lamaane u labisan shinni ay isku guursadeen deegaankan sanadkii 2009kii.
Dalka Shiinaha ayaa waxa uu ka mid yahay wadamada dunida ugu soo saarka badan malabka,inkastoo wadamo dhowr ah laga mamnuucay in loo dhoofiyo. She ayaa waxa uu qirtay in iskudaygiisa ah in uu jebiyo rikoorka dunida u yaal ee labiska shinnida in uu dhicisoobay. Nin shinniilaha ah oo u dhashay dalka Hindiya oo lagu magacaabo Vipin Seth ayaa haysta rikoorka caalamka ee dhinaca shinnida isagoo labistay shinni culeyskeedu gaarayo 135 pounds sida uu shaaciyay buugga laga qoro Guinness World Records.
Dadkan shinniilayaasha ah ayaa waxa ay ku soo jiitaan shinnida kale iyagoo boqorada shinnida soo qabta kana soo laalaadiya qeyb ka mid ah jirkooda.
0 Comments · 6702 Reads
Jowhar.com746,248 unique visits